Imigaqo yokuLungisa iNani ngokuchanekileyo
Imigaqo elula yokuLungisa iNani ngokuchanekileyo
Amanani ajikelezayo kubalulekile ukulondoloza amanani amaninzi kubalo kunye nokurekhoda amanani amade.
Xa ukujikeleza amanani onke kukho imithetho emibini yokukhumbula.
Okokuqala, kufuneka uqonde igama elithi "umgca wokujikeleza". Xa uceliwe ukuba ujikeleze ukuya kweshumi elisondeleyo, inamba yakho yokujikeleza iyinombolo yesibini ngakwesobunxele (indawo yeshumi) xa usebenza ngamanani apheleleyo. Xa uceliwe ukuba ujikeleze kwii-centa ezikufuphi, indawo yesithathu ukusuka ngakwesobunxele ngumlinganiselo wokujikeleza (amakhulu amakhulu).
Imigaqo yokuHlola iNombolo yonke
Umthetho omnye . Qinisekisa ukuba yeyiphi idijithi yakho yokujikeleza kwaye ubujonge kwicala lasekunene layo. Ukuba idijithi iyi-0, 1, 2, 3, okanye 4 ayitshintshi idijithi yokujikeleza. Zonke idijithi ezisekunene-nxalenye yecala lokudibanisa elichongiweyo liya kuba ngu-0.
Umthetho weBini . Qinisekisa ukuba yeyiphi idijithi yakho yokujikeleza kwaye ujonge ngakwesokudla sayo. Ukuba idijithi ingu-5, 6, 7, 8, okanye 9, idijithi yakho yokujikeleza ijikeleze ngeenombolo enye. Zonke idijithi ezisekunene-nxalenye yecala lokudibanisa elichongiweyo liya kuba ngu-0.
Imithetho ejikelezayo yeNombolo eyiNinzi
Xa iinombolo ezijikelezayo ezibandakanya i-decimals, kukho imigaqo emibili yokukhumbula:
Umthetho owodwa Misela ukuba yeyiphi idijithi yakho yokujikeleza kwaye ujonge ngakwesokudla. Ukuba loo nombolo i-4, 3, 2, okanye i-1, yehlisa zonke idijithi ukuya ngasekunene kwayo.
Umgaqo wesiBini Misela ukuba yeyiphi idijithi yakho yokujikeleza kwaye ujonge ngakwesokudla sayo. Ukuba loo nombolo i-5, 6, 7, 8, okanye 9 yongeza enye kwidijithi yokujikeleza kwaye ulahle zonke idijithi ukuya ngasekunene kwayo.
Umthetho wesithathu: Abanye ootitshala bakhetha le ndlela:
Lo mgaqo unikezela ngokuchanekileyo kwaye ngamanye amaxesha ubizwa ngokuba 'yiBhodi yeBhanki'. Xa idijithi yokuqala iyancipha i-5 kwaye akukho zidijithi ezilandelayo okanye idijithi ezilandelayo zi-zeros, yenza idijithi elandelelweyo (oko kukuthi ujikeleze kwinqanaba elisondeleyo nakwidijithi).
Umzekelo, i-2.315 kunye ne-2.325 yilezi zimbini 2.32 xa zigqityiwe ukuya kwiikhulu ezikufutshane. Qaphela: Isizathu salo mthetho wesithathu kukuba malunga nesiqingatha sexesha eli nani liza kubalwa kwaye esinye isiqingatha sexesha siya kuhlaziywa.
Imizekelo yeNkqubo yokuHlola iNombolo
1000 xa uceliwe ukuba ujikeleze kwiwaka elikufutshane (1000)
800 xa uceliwe ukuba ujikeleze kwikhulu elisondeleyo (100)
770 xa ubuzwa ukuba ujikeleze kwi-10 elisondeleyo (10)
765 xa uceliwe ukuba ujikeleze enye e kufuphi (1)
765.4 xa kucelwa ukuba ujikeleze ukuya kwishumi elisondeleyo (10)
765.37 xa ucelwa ukuba ujikeleze kwikhulu elisondeleyo (100th.).
765.368 xa uceliwe ukuba ujikeleze kwiiwaka ezikufutshane (1000th)
Zama iifom zokusebenzela ezizalisekileyo zizaliswe nezicombululo.
Ukujikeleza kufikeleleka xa usondele malunga nesipho. Masithi ibhilida yakho i $ 48.95. Ndiya kujikeleza ukuya kwi-$ 50.00 kwaye ndishiye isalathisi se-15%. Ukukhawuleza ufumanise iphoyinti, ndiza kuthi i-$ 5.00 ngu-10% kwaye ndifuna isahlulo se-$ 2.50 sizisa isicatshulwa sami kwi $ 7.50 kodwa kwakhona, ndiza kujikeleza ndishiye i-$ 8.00! Ukuba le nkonzo yayilungile!
Funda amaxesha okugqibela kwiintsuku ezingama-21
Ukongeza iiWebhu zeeNcwadi zeeDual
Inkulumo, nguFrancis Bacon
Bhala iphepha kwiSigqibo sokugqibela
Iilwimi zesiNgesi - Isivakalisi Isivakalisi seLwimi Ukukhula
I-Organ Jacobson kunye neNqununu yesithandathu
I-Whitewater Rafting Death Statistics
Ubomi bukaJuan Luis Guerra
UStephen Bantu (Steve) Biko
Isikhokelo sokuqala sokujonga iCriketi
Iindlela ezilishumi zokubhiyozela iBabon
Ubume benkqubo ye-Haber-Bosch Process